WordPress: Nooc cusub 5.2 iyo waxyaabo badan oo badan oo ku saabsan WP | Laga soo bilaabo Linux
WordPress: Waxyaabaha, rakibidda, qaabeynta iyo qaabdhismeedka
Qoraalkeenii hore ee ku saabsanaa WordPress (WP), Nidaamka Maareynta Mawduuca ama CMS (oo ku saleysan barnaamijka bilaashka ah iyo ilaha furan), oo loo yaqaan «WordPress: Waa maxay CMS? Waxtarka iyo Astaamaha» Waxaan si qoto dheer u baaraynaa waxa ay tahay CMS, oo aan caddeynno waxa WP yahay sida oo kale.
Hadda Daabacaddan xaadirka ah waxaan ka faalloon doonnaa nooca hadda jira ee WP (Gutenberg) iyo nooca cusub ee la sii daayay (5.2), astaamaheeda guud iyo qaabdhismeedkeeda, (shaqooyinka, ikhtiyaarrada iyo qaybaha) iyo tillaabooyinka aasaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah Rakibaadda iyo qaabeynta.
2 WordPress: Nooca hadda jira
2.1 Waa maxay WordPress?
2.2 Gutenberg: Nooca hadda jira
2.3 Faa'iidooyinka cusboonaysiinta WP
2.4 Qaab dhismeedka dhabta ah
2.4.1 Interface cusub
2.4.2 Isdhexgalka Dhaqanka (Maamulka WP)
2.5 Rakibaadda iyo qaabeynta
2.6 Beddelka WordPress
Maqaalkani ma aha hage ballaadhan oo qoto dheer oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah shaqooyinka, xulashooyinka iyo modullada laga heli karo CMS ee maanta ah WP. Laakiin taas cakiskeeda, waxaa la filayaa inay ahaato hage fudud laakiin dhameystiran oo waxtar leh oo ku saabsan WP, kaas oo naga caawin doona inaan si fudud u ogaanno una fahanno isticmaalka astaamaha kala duwan ee ku dhex jira, si aan u adeegsanno una cusboonaysiinno qalabkan.
Fikradda waa daabicitaankani waa mid yar laakiin si fiican loo abaabulay ama kaabaya qodobadii hore iyo kuwa mustaqbalka ee ka socda Blogga FromLinux ee ku saabsan WP, oo ku saleysan sida ugu dhow ee suurtogalka ah dukumiintiyada rasmiga ah ee jira. Maaddaama WP ay hadda ku jirto Bulsho Weyn oo Users ah, luqado badan, laakiin gaar ahaan Isbaanishka. Kaas oo leh liis garayn ballaaran oo macluumaad iyo aqoon aad u horumarsan leh, lana heli karo gaar ahaan WP Isbaanish.
Sidaa darteed waxaan rajeyneynaa inay tani tahay hage kooban ama hufan oo wax ku ool ah ama waxbarid si looga caawiyo dhammaan isticmaaleyaasha WP ee hadda jira, kuwa cusub iyo kuwa mustaqbalka aqoonta iyo isticmaalka aaladda la sheegay.
WordPress: Nooca hadda jira
Waa maxay WordPress?
WP waa barnaamij loogu talagalay iyadoo xoogga la saarayo helitaanka, waxqabadka, amniga, iyo sahlanaanta isticmaalka, taas oo ka dhigtay CMS-ka ugu caansan maanta. Qoraalkii ugu dambeeyayna waxaan si kooban ugu qeexeynaa sida soo socota:
WP waa CMS adag oo xor u ah soo dejinta iyo isticmaalka., laakiin sidoo kale waa daabacaad ballaaran oo bilaash ah oo bilaash ah oo lacag bixin leh iyo adeeg madal martigelin ah oo loo yaqaan "WordPress.com" kaas oo helaya cusbooneysiin aad u badan. Waxay kaloo leedahay domain kale oo walaalo ah oo loo yaqaan "WordPress.org" Sidoo kale waxaa lagu heli karaa Isbaanish. Waxayna leedahay macluumaad macluumaad iyo farsamo aad u tiro badan oo waxtar leh.
Waxaanan muujineynaa in hadda WP ay ku shaqeyso tikniyoolajiyadaha soo socda:
Maanta WP waxay isticmaashaa luqadda PHP, y MySQL sida Maareeyaha Xog-ururinta (DB) iyo Apache sida adeeg hooseeya Ruqsadda GPL. Sidaa darteed, codsi ama qalab SW ayaa sheegay inuu la kulmayo astaamaha Isha Furan (CA) loo adeegsaday Software Bilaash ah (SL).
Marka la soo koobo, waxaa si sax ah loo oran karaa inay tahay CMS cajiib ah abuurista degellada iyo baloogyada.Mid ka mid ah waxtarkeeda ama faa iidooyinkeeda ugu weyn iyada oo ah tiro aad u badan oo macluumaad ah oo la heli karo lana cusbooneysiiyay si loo ogaado loona maareeyo
Taasina waxay leedahay naqshad wanaagsan iyo geeddi-socod horumarineed oo guuleysta oo mas'uul ka ah hufnaan "Beesha Caalamka" oo wax ku darsata waqtigooda, aqoontooda iyo xirfaddooda. si WP looga dhigo badeecad casriyeysan oo ammaan ah. Marka lagu daro kumanaan ka mid ah nashqadeeyayaasha, horumariyeyaasha iyo qorayaasha wax qora oo la wadaagaya aqoontooda WP iyaga oo adeegsanaya qoraallada blogka, casharrada, dib u eegista, fiidiyowyada, iyo abuurista kumanaan mawduucyo iyo fiilooyin.
Gutenberg: Nooca hadda jira
Nooca ugu horreeya ee WP ee la sii daayay wuxuu ahaa 0.7, Maajo 27, 2003, illaa iyo hadda 5.0 Gutenberg. Tani waxay si cad u caddaynaysaa in WP ay hadda tahay qaan-gaadh, nidaam adag, oo leh bulsho xoog leh oo si joogto ah u kobcaysa. Evolution oo lagu muujiyey sii deynta nooca soo socda ee musharax 2 (RC2) ee loogu talagalay WordPress 5.2, oo la heli doono laga bilaabo Talaadada, Maajo 7, 2019.
Noocaan cusub ee 5.2 ee WP wuxuu ballanqaadayaa inuu bixiyo xitaa qalab aad u adag si loo aqoonsado loona hagaajiyo dhibaatooyinka qaabeynta iyo khaladaadka dhimashada. Tani waxay muhiim u tahay kuwa Soo-saareyaasha ah ee caawinaya macaamiishooda ama maareynta barta, maadaama ay u sahlayso inay helaan macluumaadka saxda ah markay u baahan yihiin.
Waxa kale oo ku jiri doona astaamo cusub oo ku saabsan Badbaadinta Caafimaadka Boggeeda iyo qalabyada Ilaalinta Khaladaadka PHP., kaas oo ku siin doona xasillooni badan oo maskaxeed marka ay timaado dhibaatooyinka la xiriira plugins ama mawduucyada ku jira degel maareyn ah Waxa kale oo ku jira astaamo cusub oo laga heli karo dashboardkaaga, iyo tixgelinno marin u helitaan cusub oo loogu talagalay qof kasta oo adeegsanaya teknoolojiyada caawinta, iyo in ka badan.
Laga soo bilaabo nooca 5.0, WP wuxuu adeegsadaa tifaftiraha muuqaalka cusub ee loo yaqaan "Gutenberg" taas oo ujeedadeedu tahay in wax laga beddelo qaabka waxyaabaha loo daabaco iyada oo loo marayo WordPress, sidaa darteed qof kasta, oo ay ku jiraan kuwa leh xirfado farsamo yar, ma daabici karo oo keliya laakiin wuxuu dhisi karaa degello iyo baloogyo si fudud, iyada oo aan loo baahnayn in la iibsado iyo isticmaal mawduucyada dhinac saddexaad ama plugins.
Faa'iidooyinka cusboonaysiinta WP
Cusboonaysiin kasta oo cusub ayaa badanaa keenta qaar ka mid ah faa'iidooyinka soo socda, sida: hagaajinta, isbeddelada, wax ku habboonaynta, ku darista ama tirtiridda howlaha ama astaamaha. Marka la eego guud ahaan, waxaa loo kala qaadi karaa waxyaabaha soo socda:
Hagaajinta heerka koodhka iyo adeegsiga
Hagaajinta heerka nashqadeynta ee guddiga maamulka
Isu-hagaajinta (xawaaraha iyo xawaaraha) ee koodhka
Xalka khaladaadka (cayayaanka) la helay
Isbedelada heerka tifaftiraha mawduuca
Kordhinta heerarka muuqaalka warbaahinta
Hagaajinta heerka amniga guud ee arjiga
Kuwani iyo faa'iidooyinka kale ee yar yar ayaa muhiim ka dhigaya in la cusbooneysiiyo WordPress qaabkeedii ugu dambeeyay, sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, in marwalba loo diyaariyo loona habeeyo casriga farsamada isbedelaysa.
Qaab dhismeedka dhabta ah
Waqtigaan la joogo WP waxay leedahay qaab dhismeedka maareynta soo socota oo leh ikhtiyaarro u dhigma ama shaqeynaya:
Isdhexgalka Dhaqanka (Maamulka WP)
Blogs aan raaco
Maamul wax iibsiga
Ku dar cusub
Nuqul maqaal ah
Ku dar dhexdhexaad
Qaybaha isku xidhka
Beddelka tigidhada emaylka
Mar dambe qoraal kale oo ku saabsan WP waxaan ku dhex gali doonnaa mid kasta oo ka mid ah qaybahan, qaybaha, xulashooyinka iyo waxqabadka.
Sidii aan ku sharaxnay qoraalkeenii hore ee ku saabsanaa WP, horeyba BlogLeLLkaLLLLLLLLLLLLLLLAHAHAHAA INTAA LILAAHI WA INAA IYHI RAAJICUUN macluumaadka rasmiga ah ee WordPress gudaha Isbaanishka ku rakibidda WP iyo qaabeynta. Intaa waxaa dheer isku xirka macluumaadka rasmiga ah ee Koodhadhka WordPress ee loogu talagalay rakibidda WP Multisite. Si loo buuxiyo qoraalladan in muddo ka dib dhacsan.
Waxaa jira dhowr beddelaad oo WP ah suuqa maanta. Qaar baa ka sii fiican kuwa kalena aan sidaa u badnayn. Kuwaas waxaan ka xusi karnaa:
Mar dambe qoraal kale oo ku saabsan "Websaydhyada ugu wanaagsan ee lagu dhisi karo barta internetka" waxaan ku milicsan doonnaa kuwan iyo xulashooyinka kale ee la heli karo.
Ugu dambeyntii waxaan dhihi karnaa WP waa CMS aad u fiican, maaddaama ay u saamaxayso in si fudud loo maareeyo waxyaabaha ku jira iyo muuqaalka websaydh aan aqoon weyn u lahayn barnaamijyada. Taas oo u horseeday inay qabsato boos mudan oo ka mid ah kuwa loogu isticmaalka badan yahay adduunka.
Intaas waxaa sii dheer, xaqiiqda ah in shatigeedu yahay "GPL" wuxuu noo ogolaanayaa inaan isticmaalno iyadoon baahi loo qabin., oo ka duwan CMS kale oo badan oo tayo ahaan ama awood ahaan siman ama ka yar. Isticmaalkeeda maxaliga ah (adeegeena gaarka ah) ama Webka, oo leh cinwaankeena, waa wax badanaa calaamadeeya kala duwanaanshaha muhiimka ah ee ixtiraamka kuwa kale.
Iyo qadarka weyn ee Plugins, Mawduucyada iyo waxyaabo kale oo lagu daray (iyada oo la adeegsanayo barnaamijyo cusub), taas oo ka dhigaysa WP shey gaar ah oo si buuxda loo dheehan karo, taas oo waliba maalin kasta u koraysa jihada saxda ah.
Iyo interface cusub, tan iyo markii la sii daayay nooca 5.0, taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud in la abuuro lana maareeyo waxyaabaha ku jira. Marka lagu daro bulshadeeda qiimaha iyo baaxada leh, taas oo noo sahlaysa inaan xal u helno guuldarooyinkeena ama khaladaadka ku saabsan WP, ama talooyinka iyo maqaalada caawinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » WordPress: Nooc cusub 5.2 iyo wax badan oo ku saabsan WP
Tiknoolajiyada 5G waxay kuxirantahay Kubernetes
Microsoft waxay sii deyneysaa Q # isku-duwaha iyo jaangooyeyaasha kumbuyuutarka